Ning မှာထည့်မိတဲ့ code ပြန်ဖြုတ်လို့မရလို့ပါ။ — MYSTERY ZILLION
Ning မှာထည့်မိတဲ့ code ပြန်ဖြုတ်လို့မရလို့ပါ။
February 2010 edited February 2010 in Blog
</SCRIPT>[/HTML] ဒီ code လေးကို ning ရဲ့ text box တစ်ခုထဲမှာထည့်လိုက်မိပါတယ် ၊ disable text select code ဆိုတာနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်တာပါ။ မကြိုက်လို့ ပြန်ဖြုတ်မယ်လုပ်တော့ အဲ့ code ကို select ပေးလို့မရတော့ဘူးဗျ။ တခြားဘယ်စာမှလည်း select ပေးလို့ မရတော့ဘူးဗျာ။ အဲ့ဒီ text box ထဲမှာ တစ်ခြား code တွေလည်းရှိိတော့ text box ကိုဖြုတ်လည်းမပစ်ချင်ဘူးဗျာ။ ဘယ်လိုလုပ်ရင် ရနိုင်လဲဆိုတာ ပြောပြပေးကြပါဗျာ
there is an add-on "RightToClick".
This addon can enable you to select text which are forbidden text selection..
ကျွန်တော်က R-click လုပ်မရတဲ့ code ကိုပါ အဲ့ဒီ text box ထဲမှာထည့်ထားမိလို့ R-click လည်းနှိပ်မရပါဘူး။ r-click နှိပ်လို့ရအောင် code ကိုပြန်ဖြုတ်ဖို့ select လည်းပေးမရလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါဦးဗျာ
try with firebug.
sawhan wrote: »
အဲ့ add-on ကိုသွင်းပြီးရင် ညာဘက်အောက်မှာ ရွှေရောင်မြှားလေးရှိပါတယ်. သူ့ကို right click နှိပ်ပြီး option ကနေဝင်ပြင်ရင် left click ပါနှိပ်လို့ရပါတယ်. ပုံမှန်အတိုင်း ရွှေရောင်မြှားကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသုံးရင်တော့ right click ကို enable လုပ်ပေးသွားပါတယ်။
option မှာဝင်ပြင်ရမှာက Disable site mouse-click handlers (can disable some left clicks too) ဆိုတာကိုအမှန်ခြစ်ထည့်ပေးဖို့ပါ. အဆင်ပြေပါစေ
အဆင်ပြေသွားပြီအကိုရေ.. thank ဗျာ၊ တကယ် နို့မို့ဆို ကျွှန်တော်အဲ့ဒါလုပ်မရတာနဲ့ ခေါင်းကိုက်နေတာ၊